ဇနီးနှင့်သားတစ်ဦးပင် ရရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း အတန်းပညာများကို ကြိုးစားသင်ယူကာ ပညာများကို ဆက်လတ်ဆည်းပူနေသည့် ၈တန်းကျောင်းသားလေးဇနီးနှင့်သားတစ်ဦးပင် ရရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း အတန်းပညာများကို ကြိုးစားသင်ယူကာ ပညာများကို ဆက်လတ်ဆည်းပူနေသည့် ၈တန်းကျောင်းသားလေး
ယခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကာလများတွင် လူငယ်အများစုတို့ဟာ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုထူထောင်ရန်အတွက် ခက်ခဲမှုတို့ကြောင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှသာ လက်ထပ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Chuongဆိုသည့် ၈တန်းကျောင်းသားလေးဟာ လက်ထပ်ယူခဲ့သည့်အပြင် သားတစ်ဦးပင်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Chuongဆိုသည့်ကောင်လေးဟာ အသက်၁၁နှစ်အရွယ်တည်းက မိဘတို့ကို လက်ထပ်ချင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သောကြောင့် မိဘတို့ဟာလည်း အသက်၁၆နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည့်သူ၏ကောင်မလေးနှင့် မင်္ဂလာပွဲလေးကို ကျင်းပပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ...
လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ရှင်တွေသိဘို့ လ္ဘက်ရည်တစ်ခွက် 500တစ်ငုံစာပဲ ပါတယ် ဘီယာတစ်ခွက် 800လေးငါးခါ ငုံလို့ရတယ် ဘီယာသောက်ရင်ကားတွေ ရွှေတွေ ငွေတွေနောက်ဆုံး ဘီယာ freeပေါက်နိုင်သေးတယ်💲💲💲 မင်းတို့ဆိုင်က လ္ဘက်ရည်မှာယင်ကောင်တွေ ဘာတွေပဲ ပေါက်ဖူးတယ် ဘီယာ 3ခွက်သောက် တစ်ခွက် အလကားတိုက်တယ် ...
မန္တလေးကခိုးဆိုးလုနှိုက်တွေကို ကာကွယ်နည်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်မန္တလေးကခိုးဆိုးလုနှိုက်တွေကို ကာကွယ်နည်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
သတိ မန္တလေး မြို့ကြီးမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဖုန်းအလုခံရ. ပိုက်ဆံအိပ်အလုခံရ. အဲ့ထက်ဆိုးတာ ကရိုက်လုပြီး အသက်သေဆုံးသည်အထိ လွန်လွန်ကျူးကျူး လုယက်ခြင်း အဖွဲလိုက် ဓားဖြင့်ခုတ် ပြီးရိုက်လုခြင်း နေစဉ်နေတိုင်း တမြို့လုံး တစ်နေရာ မဟုတ် တစ်နေရာ ဖြစ်နေတာပါ။အခုအချိန်မှာ ...
မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဇနကဟောကိန်းမှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဇနကဟောကိန်း
သင်​့အသက်​ဘယ်​​လောက်​လဲ? ဘာ​နေ့​မွေးလဲ?သာမှန်​မှန်​​ပြောပါ…မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဇနကဟောကိန်း… ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ပညာရှင်များထ်ိ သုံးစွဲနေသော တွက်ကိန်းဖြစ်ပါသည်။ တွက်ကိန်းအား ပုံသေကားချမယူပဲ မဟာဘုတ်စသော ...